Bakka bu'oota uummataa Maayik Koofmaan fi Kriis Ismiiz wixineen seeraa 128 raggasifamuun booda miidiyaaf ibsa yeroo kennan, Kaapitool Hiil, Waashingitan Diisii, Ebla 10, 2018
Haala qabinsa mirga dhala-namaa fi deemsa ijaarsa dimookiraasii Itiyoophiyaa sirreessuu irratti an fuuleffate, wixineen seeraa Kibxata harraa mana maree Yunaayitid Isteetsin mormii tokko malee raggasifameera.
Miseensota mana marichaa gama demookiraatii fi ripablikaaniin deeggarsa guutu an argate wixinichi "Kabajaa mirga dhala-namaaf kennamu deeggeruu fi Itiyoophiyaa keessatti bulchiinsi hunda hammate akka jiraatu jajjabeessuu," mata duree jedhuun bara darbe bocamee irratti hojjatamaa ture.
Wixinee seeraa 128 adda durummaadhan ispoonsarii gochudhan guyyaa harra manaaf an dhiheessan bakka bu'aan uummata Niiw Jarsii Kiriis Ismiizi, dhiita mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti geggeefamu, keessumattu immoo oggoota sadeen darbaniif ajjeechaa fi dararaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti godhamaa ture daraan balaleffachuudhan manni deeggarsa akka isaaniif godhu gaafatan.
“Dargaggoota hirmaannaa siyaasaa fi guddina diinagdee gafatan irratti tarkaaffi gitaa ooliitu fudhatame, nannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti namoota kuma tokkoo olitu ajjeefamees,” jedhan bakka bu'aan ummataa Kriis Ismiiz.
Filamuu Dr. Abiyyi Ahimad fakkeenya gochuudhan, Itoophiyaan karaa jijjirramaa irra jirti jechuun qaamoota wixineen qophaahe akka fashalaahu gafatan laalchisees Kiriis, “ Itoophiyaa keessatti yeroo jijjirramni angoo jiru wanni waada galamuu bayyee dha hojiittti garuu in hiikkamu,” jechuudhan cichanii dubbatan.
Wixineen seeraa 128 walitti dhufeenyi Yunaaytiid Isteets fi Itoophiyaan funduratti qabaatanis kutannoo Itoophiyaan dimookiraasii dagaagsuu fi ol-aantummaa seeraa kabachiisuu irratti qabdu irratti murtahuu akka qabu tarreessa.
Hawaasni oromoo fi saboota Itoophiyaa kaan irraa mana maree Ameerikaatti argamanii turan murtee harra irra gahameen gamaaduu isaanii dubbatan.